The Jurassic Coast, ebe Broadchurch usoro | Akụkọ Njem
Getaways Europe | | England, United Kingdom
Obodo nke Broadchurch nke na-enye aha ya na nsonye TV adịghị, mana ọdịdị ọdịdị dị egwu na-egosi na ya. Ha na-na ebe a na-akpọ Jurassic Coast nke ógbè Dorset, n’ebe ndịda England. Mpaghara mara mma nke so na UNESCO World Heritage Site.
A gbara ọtụtụ n'ime mpụga ebe ahụ, ya na ugwu ndị ahụ dị egwu nke ghọrọ nnukwu akara ngosi nke usoro ahụ, ọkachasị nke akpọrọ Nkume ọdịda anyanwụ na osimiri nke Osimiri East ebe ahuru ozu nwatakiri ahu edere na isi mbu. Na-adịghị anya n'ebe ahụ, bụ n'okporo ámá nke West Bay na Cleveon nke e megharịrị obodo nke Broadchurch. Televisionzọ telivishọn a na-esikwa Jurassic Pier (Oghere Jurassic) na ọdụ ụgbọ mmiri. Ọganiihu nke usoro a na-adọta ọtụtụ ndị njem nleta karịa mgbe ọ bụla.
Ha niile kwụsịrị na Quay West ebe o biliri Nzuzu, ụlọ na-achọsi ike na nke ahụ dị n'usoro ahụ ihe mpụga nke ọdụ ndị uwe ojii Broadchurch. Ihe yiri ya na-eme na Quayside, ebe Ebe obibi Ellipse a gbanwere ya ka ọ bụrụ Broadchurch Café.
Ma ma ị bụ onye na-akwado nke usoro ma ọ bụ na, njem na Jurassic Coast nke dị na ndịda England ọ ga-abụrụ gị ahụmahụ a na-agaghị echefu echefu. Ọ bụ ihe karịrị 15o kilomita nke ala gbara osimiri okirikiri a ma ama maka morphology dị egwu na ọdịdị ala ya. Site na Orcombe Point, nke dị nso Exmouth, ruo Old Harry Rocks a ma ama, ije zuru oke na-eju anyị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » England » The Jurassic Coast, ebe Broadchurch usoro
Ili Jizọs nke dị na Japan
Plitvice Lakes, otu n'ime obodo kachasị mma na Europe